Chirongwa chekuona: kurapwa, kupora | TeraNews.net
Chirongwa chekuona: kurapwa, kupora
Munyori Tera nhau Yakabudiswa pa 21.04.2019
Laser maonero ekururamisa wakanaka uye, kunyanya kukosha, anoshanda. Asi zvinodhura. Pane mhinduro dziri nyore dzinotaridzwa neaculist nemazino akacheneswa. Mushure mezvose, chirongwa chiri nyore chechiratidzo chinonyima vanachiremba mari yakagadzikana.
Saka, basa remunhu ndere kuwana mhedzisiro inodikanwa nemari shoma yenguva. Bvumirana, zuva rega rekuzvirapa pachako rinoshungurudza - vhiki kana maviri, uye chishuvo chinopera. Naizvozvo, iyo inopa mhinduro dziri nyore kwazvo dzinotora huwandu hwe5-7 maminetsi pazuva.
Chirongwa chekuona: smartphone
Ziso Rokurovedza Muviri chirongwa chiri nyore uye chemahara icho, mukuenzanisa nevanokwikwidza, hachiremeri mushandisi nekushambadza Maitiro akareruka, anoonekwa uye anonzwika ekuperekedzana - zvese zvinoitirwa vanhu uye zvinoitirwa mhedzisiro. Unogona kurodha chirongwa ichi kubva kuGoogle Play Store kana App Store.
Iko kushayikwa kwezvirongwa zvema smartphones mune yakawandisa ziso rekunetseka. Mushure mezvose, mushandisi achangoerekana atarisana nekutarisa kwefoni foni. Pazviratidziro zvidiki, pikicha haina kujeka, saka tinokurudzira kuti urangarira chiitwa uye, uchitarisa pane chimbo chekurira, ita mabasa kunyangwe uchitarisa paAir screen.
Chirongwa chekuona: komputa (laptop)
Pamhinduro dzakasununguka, Ziso Corrector rakanyatsogadzirirwa. Ichi chirongwa chakagadzirwa nenzira yeNorbekov, vachishandisa maitiro eSIRDS mifananidzo. Mifananidzo-mitatu-yakatarisana mifananidzo, stereo dhizaini. Pakutanga zvinonetsa, asi chaizvo mushure mekirasi imwe kana mbiri mushandisi angakanganwa nezve kusagadzikana.
Mhinduro yakanakisa. Mufananidzo uri nyore kurangarira, kunyange munhu anoona zvisina kunaka asina magirazi, anozoona zvekuita. Gymnastics iri nyore uye haitore inopfuura 5 maminetsi kuti upedze. Izvo zvakanaka kusanganisa shanduro yepepa uye chirongwa chekuona pane PC. Stereo mifananidzo plus kurovedza muviri inowedzera kushanda.
Kana uchipedza mabasa, vanachiremba vanokurudzira kuongorora unyoro hwemudzidzi uye kudzivirira kuoma kunze.
Kana zvichikwanisika, suka kumeso kwako nemvura inodziya uye usapukuta netauro. Kana iwe uchinzwa kusununguka kwekunzwa, vhara maziso ako zvakanyanya uye edza kuzorora. Chirongwa chekuona pane smartphone kana PC inobata bata, saka edza kudzidza maitiro ese uye uaite, zvisinei nechiratidziri.
Edza kupedza makirasi mangwanani kana mhasuru dzemaziso dzichinyatsogadzikana. Usatora zororo - kurovedza muviri kunoitwa zuva nezuva. Kana iwe uchida uye uine nguva yemahara, unogona kuita maekisesaizi emaziso kanosvika kaviri pazuva.
Iyo pink inopenya mwedzi ndeyechisiko chiitiko
Isiri-yekubata sipo yekuparadzira - chic mhinduro yeimba yako
Neuralink - Elon Musk akagadzirisa tsoko
Firimu ini ndiri Ngano - chiitiko chipi chinoitika gore
Teresikopu yekuongorora nyeredzi F30070M ine katatu
Chii chaunotora newe pakukwira: runyorwa rwezvinhu zvakakosha
Windows 11 - Hardware zvinodiwa zvinogona kuviga iyo system mubud
Apple iPhone SE 2022 inogona kudzokorora ramangwana reiyo Mini Mini
MINI PC Beelink GKmini 8/256 ine Windows 10 - ongororo
Hyundai Santa Fe Kufuridzira 2018: chic muKorea
Iyo seti yezvirongwa zveTV bhokisi: ongororo, mazano
JBL Charge 4 - mutauri ane ruzha nePower Bank